Vaovao - Momba ny bbq grill tsy misy setroka
Ny fivoriana no fomba tsara indrindra hifandraisana sy hifandraisana amin'ny namana; ny barbecue amin'ny fiaraha-mivory dia afaka mampiroborobo ny fisakaizana eo amin'ny tsirairay.
Fa ny fanomanana barbecue mandreraka dia fiomanana mandreraka tokoa raha tsy misy ny fanampian'ny havana sy namana.
Ahoana no hanomezana fahafaham-po ireo dingana mandreraka ireo nefa mahafa-po ny faniriana hihinana barbecue? Any Shina, ny tanora, ny fianakaviana ary ny namana dia hisafidy fomba manokana hanomezana fahafaham-po ny fahafinaretan'izy ireo ara-panahy - Sakafo mamatonalina（ XiaoYe no dikan'ny teny sinoa）
Matetika ny sakafo tsotra sy tsotra dia maka fotoana. Mba hanonerana an’io fiandrasana lava be io dia lasa malaza eny amin’ny toeram-pivarotan-tsakafo kely ny giro tsy misy sigara.
Ny giro tsy misy setroka dia mampiasa ny fitsipiky ny fanafanana ny fatana seramika amin'ny lafiny roa mba hampihenana ny mety hisian'ny lelafo misokatra. Satria lava indrindra ny vatan'ny grill, ny fanamainana volo naorina dia ahafahan'ny toerana mafana indrindra amin'ny lalana roa miangona eo afovoany mba hahatratrarana ny vokatry ny fanamainana fanamiana. Noho io fiasan'ny fanaparitahana hafanana io, ny sakafo barbecue mahasalama sy matsiro dia nampiditra fifandonana manokana.
Ny vokatra lafarinina, ny hena zanak'ondry, ny steak, ny oyster, ary ny hazan-dranomasina dia afaka manome fahafaham-po ny sakafo matsiro rehetra, ny teknika mahandro sakafo ary ny fifandonan'ny zava-manitra. Na izany no ho fivoriam-pianakavianao na orinasa kamiao snack, ny vidiny ambany indrindra, ny mpanampy ody haingana indrindra.
Mazava ho azy, ho an'ny fanamorana ny vondron'olona samihafa, ny giro tsy misy setroka dia afaka misafidy habe samihafa, 0,89 metatra, 1,2 metatra, 1,5 metatra, sns., izay tena mety amin'ny fitaovana fanaovana barbecue ara-barotra. Ity fitaovana ity dia nampiasaina tamin'ny araben'ny sakafo any Azia Atsimoatsinanana sy ny sakafo vietnamiana. Teny an-dalana, raha mbola mandeha ianao, dia hahita azy ireo. Ny haren'ireo fitaovana ireo dia lehibe, mahatonga anao ho mpandraharaha tena tsara, manomboka amin'izao fotoana izao.